किन परमेश्‍वरले आखिरी दिनहरूको न्यायको काम गर्न देहधारण गर्नुहुन्छ? | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
हामीले आखिरी दिनहरूमा परमेश्‍वरको न्यायको कामबारे पहिले नै केही पटक कुराकानी गरिसकेका छौँ। आज हामी कसले यो न्यायको काम गर्नुहुन्छ भनेर विचार गर्न चाहन्छौं। परमेश्‍वरले आखिरी दिनहरूमा मानिसजातिमाझ न्याय गर्नुहुनेछ, सृष्टिकर्ता मानिसहरूकहाँ देखा पर्नुहुनेछ र व्यक्तिगत रूपमा आफ्ना वचनहरू व्यक्त गर्नुहुनेछ भनेर सबै विश्‍वासीहरूलाई थाहा छ। त्यसोभए, परमेश्‍वरले यो न्याय कसरी गर्नुहुन्छ? के उहाँको आत्मा आकासमा देखा पर्नुहुन्छ र हामीसँग बोल्नुहुन्छ? त्यो सम्भव छैन। प्रभु येशू स्वयंले हामीलाई भन्नुभयो: “किनभने पिताले कुनै मानिसको न्याय गर्नुहुन्न, तर पुत्रलाई नै सबै न्याय सुम्पनुभएको छ” (यूहन्‍ना ५:२२)। “र न्याय गर्ने अधिकार पनि दिनुभएको छ, किनभने उहाँ मानिसको पुत्र हुनुहुन्छ” (यूहन्‍ना ५:२७)। न्यायको काम “पुत्र” ले गर्नुहुन्छ भनेर हामी यसबाट बुझ्न सक्छौं। “मानिसको पुत्र” भन्नाले देहधारी परमेश्‍वरलाई बुझाउँछ भनेर हामीले जान्नुपर्छ, त्यसैले यसको अर्थ, उहाँ आखिरी दिनहरूमा न्यायको काम गर्न देहमा आउनुहुन्छ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ! त्यसोभए के तपाईंलाई थाहा छ आखिरी दिनहरूको न्यायको काम के हो? यसलाई पूरा गर्न परमेश्‍वर किन देह बन्नुहुनेछ? सरल भाषामा भन्नुपर्दा, यो मानिसजातिलाई मुक्ति दिने मुक्तिदाताको आगमन हो। परमेश्‍वर देह हुनु र पृथ्वीमा आउनु भनेको मुक्तिदाताको अवतरण हो। उहाँले मानिसजातिलाई सदाका लागि पापबाट मुक्ति दिन व्यक्तिगत रूपमा न्यायको काम गर्नुहुन्छ। उहाँको न्यायलाई स्वीकार गरेर, तपाईं पापबाट स्वतन्त्र हुन, शुद्ध हुन र मुक्ति पाउन सक्नुहुन्छ। तब तपाईं विपत्तिबाट बच्नुहुनेछ र अन्ततः स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नुहुनेछ। त्यसैले, मुक्तिदाताको न्यायको कामलाई स्वीकार गर्नु व्यक्तिको नतिजा र गन्तव्यसँग सम्बन्धित छ—के तपाईंलाई यो महत्त्वपूर्ण लाग्दैन? आखिरी दिनहरूमा किन परमेश्‍वर उहाँको न्यायको लागि देह बन्नुपर्छ भनेर धेरै विश्‍वासीहरूले सोध्न सक्छन्। तिनीहरू सोच्छन्, प्रभु येशू आत्मिक रूपमा बादलमा आउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्‍वरले हात फैलाउनुहुनेछ र हामी सबैलाई राज्यमा सिधै उठाइ लैजानुहुनेछ—के त्यो अद्भुत हुनेछैन र? यस प्रकारको सोचाइ अति सरल मात्र होइन, अवास्तविक पनि हो। तपाईंलाई थाहा हुनुपर्ने, परमेश्‍वरसित पवित्र र धर्मी स्वभाव छ। के उहाँले पापीहरूलाई आफ्नो राज्यमा लैजानुहुनेछ? हामी सबै यो बाइबल पदसँग परिचित छौँ, “पवित्रताविना कुनै मानिसले प्रभुलाई देख्‍नेछैन” (हिब्रू १२:१४)। सबै पापी छन् र निरन्तर पाप गरिरहन्छन्। परमेश्‍वरले मानिसलाई सीधा राज्यमा लैजानुहुनेछैन—त्यसरी उहाँले हामीलाई बचाउनुहुन्न। परमेश्‍वरले पापीहरूलाई घृणा गर्नुहुन्छ र तिनीहरू परमेश्‍वरलाई हेर्न योग्य छैनन्। यसमा कुनै शङ्का छैन। त्यसोभए, आखिरी दिनहरूमा मानिसजातिलाई बचाउन मुक्तिदाता कसरी आउनुहुन्छ? सर्वप्रथम, उहाँले हामीलाई भ्रष्टाचारबाट धुन न्याय गर्नुहुन्छ, हामीलाई पाप र शैतानका शक्तिहरूबाट बचाउनुहुन्छ, र त्यसपछि हामीलाई राज्यमा लैजानुहुन्छ। यदि तपाईंको पापी अवस्थालाई हल गरिएको छैन भने, परमेश्‍वरले तपाईंलाई विपत्तिहरूबाट बचाउनुहुनेछैन, झन् राज्यमा लैजाने त कुरै आउँदैन। विपत्तिहरू सुरु भइसकेका छन् र सबैले संसारको अन्त्य भइरहेको महसुस गर्दैछन्, मानौँ मृत्यु नजिक छ। सबै जनाले मक्तिदाता आउनुहुन्छ र मानिसजातिलाई मुक्ति दिनुहुन्छ भनेर पर्खिरहेका छन्, त्यसैले, उहाँलाई र उहाँका आखिरी दिनहरूको न्यायको कामलाई स्वीकार गर्नु अति महत्त्वपूर्ण छ! यहाँ विश्‍वासीहरूले मुक्ति पाउने कि नपाउने र स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे कुञ्जी लुकेको छ।
तर पहिले आखिरी दिनहरूको न्यायको काम के हो, त्यसबारे कुरा गरौँ। धार्मिक मानिसहरूले आखिरी दिनहरूको न्यायलाई एकदमै सामान्य कुरा हो भन्ठान्छन्, र “न्याय” भन्नासाथ तिनीहरूलाई पक्कै के लाग्नेछ भने, यो त प्रभु येशूले आत्मिक रूपमा गर्नुहुनेछ, प्रभु आउनुहुनेछ र हामीसँग भेट्नुहुनेछ र हामीलाई राज्यमा लैजानुहुनेछ, त्यसपछि, अविश्‍वासीहरूलाई दोषी ठहराइनेछ र नाश गरिनेछ। वास्तवमा, यो ठूलो भूल हो। तिनीहरूको गल्ती कहाँ छ? हरेक पटक परमेश्‍वर मानिसजातिलाई मुक्ति दिने काम गर्न आउनुहुन्छ, यो वास्तवमै धेरै व्यावहारिक र यथार्थपरक छ, बिलकुलै अलौकिक कुरा होइन। त्यसबाहेक, तिनीहरूले प्रभुको आगमनबारे सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बाइबलीय अगमवाणीहरूलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्—न्यायको काम गर्न मानिसको पुत्रको रूपमा परमेश्‍वर देह बन्नुहुन्छ भन्नेबारे भविष्यवाणीहरू। प्रभु येशूले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो: “किनभने जसरी बिजुली पूर्वबाट चम्‍किन्‍छ र पश्‍चिमतिर पनि चम्‍किन्‍छ; मानिसको पुत्रको आगमन पनि त्यस्तै हुनेछ” (मत्ती २४:२७)। “किनभने पिताले कुनै मानिसको न्याय गर्नुहुन्न, तर पुत्रलाई नै सबै न्याय सुम्पनुभएको छ” (यूहन्‍ना ५:२२)। “मलाई इन्कार गर्ने र मेरा वचनहरू ग्रहण नगर्नेलाई न्याय गर्ने एक जना हुनुहुन्छ: मैले बोलेको त्यो वचनले अन्तको दिनमा उसको न्याय गर्नेछ” (यूहन्‍ना १२:४८)। “मैले तिमीहरूलाई भन्‍नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, तर अहिले तिमीहरूले ती सहन सक्‍दैनौ। तैपनि, जब उहाँ, अर्थात् सत्यका आत्मा आउनुहुन्छ, उहाँले तिमीहरूलाई सारा सत्यतामा अगुवाइ गर्नुहुनेछ” (यूहन्‍ना १६:१२-१३)। र १ पत्रुस ४:१७ मा भनिएको छ: “किनभने परमेश्‍वरको घरानाबाट न्याय सुरू हुने समय आएको छ।” के यी भविष्यवाणीहरू पूर्ण रूपमा स्पष्ट छैनन् र? प्रभु आखिरी दिनहरूमा मानिसको पुत्रको रूपमा देह बन्नुहुन्छ, सत्यताहरू व्यक्त गर्नुहुन्छ र न्यायको काम गर्नुहुन्छ। यसमा कुनै शङ्का छैन। न्यायको काम मानिसहरूले सोचेजस्तो परमेश्‍वरले विश्‍वासीहरूलाई सीधै स्वर्गमा लैजानुहुन्छ त्यसपछि अविश्‍वासीहरूलाई दोषी ठहराउनुहुन्छ र नाश गर्नुहुन्छ अनि कुरा त्यति हो, भन्ने जस्ता केही होइन। यो त्यति सामान्य कुरा होइन। आखिरी दिनहरूको न्याय परमेश्‍वरको घरबाट सुरु हुन्छ र यो पहिला, परमेश्‍वरका आखिरी दिनहरूको न्यायलाई स्वीकार गर्नेहरूमाझ गरिन्छ। मतलब, मानिसको पुत्र देह भएर पृथ्वीमा आउनुहुन्छ, मानवजातिलाई शुद्ध पार्न र मुक्ति दिन धेरै सत्यहरू व्यक्त गर्नुहुन्छ, परमेश्‍वरका चुनिएका मानिसहरूलाई सबै सत्यहरूमा प्रवेश गर्न मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ। यो, आखिरी दिनहरूमा मुक्तिदाताको काम हो र परमेश्‍वरले धेरै पहिले नै योजना गर्नुभएको थियो। अविश्‍वासीहरूको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा, तिनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा दोषी ठहराइनेछ र विपत्तिद्वारा हटाइनेछ। अहिले मुक्तिदाता देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्‍वरको रूपमा आइसक्नुभएको छ, उहाँले मानिसजातिलाई शुद्ध पार्न र मुक्ति दिन आवश्यक सबै सत्यताहरू व्यक्त गरिरहनुभएको छ, परमेश्‍वरको घरबाट सुरु गरेर न्यायको काम गर्नुहुँदैछ। सर्वशक्तिमान परमेश्‍वरले व्यक्त गर्नुभएका यी सत्यताहरूले सारा संसारलाई हल्लाएका छन्, र हरेक राष्ट्रका लगभग सबैले ती सत्यताबारे सुनेका छन्। प्रभुको पुनरागमनबारे बाइबलका अगमवाणीहरू पूर्ण रूपमा पूरा भएको हामी देख्न सक्छौँ।
दुर्भाग्यवश, अझै पनि धेरै मानिसहरूले परमेश्‍वरका आखिरी दिनहरूको न्यायको कामलाई बुझ्दैनन् र केवल एउटा अलौकिक घटना हेर्ने आशा गरिरहन्छन्: परमेश्‍वर आकासमा देखा पर्नुहुन्छ र हामीसित बोल्नुहुन्छ। यो अत्यन्तै अमूर्त कुरा हो। सर्वशक्तिमान परमेश्‍वरले कसरी न्याय गर्नुहुन्छ भनेर राम्रोसँग बुझ्नका लागि उहाँ के भन्नुहुन्छ, त्यो हेरौं “न्यायको काम परमेश्‍वरको आफ्नै काम भएको हुनाले, स्वाभाविक रूपमा नै यसलाई परमेश्‍वर आफैले नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ; उहाँको सट्टामा कुनै पनि मानवले यो गर्न सक्दैन। मानवजातिलाई जित्नका लागि न्यायचाहिँ सत्यताको प्रयोग भएको हुनाले, मानवका बीचका यस किसिमको काम गर्नका लागि परमेश्‍वर अझै पनि देहधारी रूपमा प्रकट हुनुहुनेछ भन्ने कुरामा कुनै प्रश्न छैन। त्यसो भन्नुको अर्थचाहिँ, आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टले, सारा संसारभरिका मानिसहरूलाई सिकाउन यो सत्यता प्रयोग गर्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई सबै सत्यताहरू प्रकट गरिदिनुहुनेछ। परमेश्‍वरको न्यायको काम यही नै हो” (वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “ख्रीष्टले सत्यताद्वारा न्यायको काम गर्नुहुन्छ”)।
अब त हामीले परमेश्‍वरले आखिरी दिनहरूको न्याय कसरी गर्नुहुन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हो। यो, मुख्यतया सत्यताहरू व्यक्त गरेर, अनि मानिसजातिलाई न्याय गर्न, धुन र मुक्ति दिन यी सत्यता प्रयोग गरेर गर्नुहुन्छ। अर्थात्, आखिरी दिनहरूमा परमेश्‍वरले आफूसित एकै मन र हृदय भएका मानिसहरूको समूहलाई पूरा गर्दै मानिसको भ्रष्टता धुन, मानिसहरूको एउटा समूहलाई मुक्ति दिन र शुद्ध पार्न यो न्यायको कामलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। यो, परमेश्‍वरको ६,००० वर्षे व्यवस्थापन योजनाको प्रतिफल हो, र आखिरी दिनहरूको न्याय कामको गाँठी कुरा हो। त्यसैले मुक्तिदाता सर्वशक्तिमान परमेश्‍वरले यति धेरै सत्यहरू व्यक्त गरिरहनुभएको छ, मानिसका सबै भ्रष्ट स्वभावको खुलासा र न्याय गर्नुहुँदैछ, निराकरण, काटछाँट, परीक्षण र शोधन मार्फत मानिसहरूलाई धोइरहनुभएको छ र परिवर्तन गरिरहनुभएको छ, मानिसको पापको जरा उखेल्नुहुँदैछ, हामीलाई पाप र शैतानका शक्तिहरूबाट पूर्ण रूपमा उम्कन, र उहाँका लागि समर्पण र श्रद्धा विकास गर्न मदत दिनुहुँदैछ। यो कुरा केही मानिसहरूलाई अलिक अन्योलपूर्ण लाग्न सक्ला। प्रभु येशूले मानिसजातिलाई छुटकारा दिनुभयो, त्यसोभए, आखिरी दिनहरूमा मानिसजातिलाई न्याय गर्न किन परमेश्‍वरले सत्यहरू व्यक्त गर्नुपर्छ त? शैतानले मानिसलाई कति गहिरो रूपमा भ्रष्ट पारेको छ भनेर तिनीहरूले बुझ्न सक्दैनन्। परमेश्‍वरले आखिरी दिनहरूमा हाम्रो भ्रष्ट स्वभावलाई हटाएर हामीलाई मुक्ति दिनुहुन्छ। यो कुनै साधारण कुरा होइन। यो केवल प्रभुमा हाम्रा पापहरू स्वीकार गर्ने र पश्चात्ताप गर्ने कुरा मात्र होइन। भ्रष्ट स्वभाव र पापी अवस्था बेग्लाबेग्लै कुरा हुन। ती पापपूर्ण व्यवहारहरू होइनन्, तर हाम्रो मन र आत्मामा बस्ने कुरा हुन्। ती हामीभित्र गहिरो रूपमा निहित स्वभावहरू हुन्, जस्तै अहङ्कार, धूर्तता, दुष्टता र सत्यताप्रतिको घृणा। यी भ्रष्ट स्वभावहरू मानिसको हृदयभित्र लुकेका हुन्छन् र ती भेट्टाउन हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। कहिलेकाहीँ, कुनै-कुनै पाप प्रष्ट देखिँदैन र कसैले त्यसलाई असल कुरा भन्न सक्छन्, तर तिनीहरूको हृदयमा धूर्त र घृणित मनसाय हुन्छ, तिनीहरूले अरूलाई धोका दिन्छन् र बहकाउँछन्। यो, उनीहरूको स्वभावको समस्या हो। परमेश्‍वरको दीर्घकालीन न्याय र प्रकाशबिना, र साथै निराकरण, काटछाँट र परीक्षाबिना, मानिसहरूले यसलाई बुझ्दैनन्, परिवर्तन गर्ने त कुरै छोडौँ। प्रभुमा विश्‍वास गर्नेहरूमध्ये को चाहिँ जीवनभरका लागि आफ्नो पाप स्वीकार गरेपछि पापबाट उम्केका छन् र? कोही पनि छैनन्। र त्यसैले, आखिरी दिनहरूको न्यायबिना प्रभुको छुटकारा मात्र अनुभव गरेर त केवल आफ्नो पापी व्यवहारलाई मात्र चिन्न सकिन्छ, तर तिनीहरूको पापपूर्ण प्रकृति, पापको जड—अर्थात्, भित्रभित्रै गहिरएको भ्रष्ट स्वभाव—मानिसहरूले देख्ने कुरा होइन, झन् त्यसलाई समाधान गर्नु त परको कुरा हो। यसलाई कसैले नकार्न सक्दैन! त्यसैले, यो आखिरी दिनहरूमा परमेश्‍वरले व्यक्तिगत रूपमा देहधारण र न्याय गर्नुभएर अनि धेरै सत्यताहरू व्यक्त गर्नुभएर मात्र अनि उहाँको दीर्घकालीन प्रकाश र न्याय मार्फत मात्र, मानिसहरूले आफ्नो भ्रष्टाचारको सत्यता प्रष्ट देख्न सक्छन् र आफ्नै सार चिन्न सक्छन्, अनि यही न्याय मार्फत तिनीहरूले परमेश्‍वरको धार्मिकता र पवित्रताबारे थाहा पाउँछन्, र परमेश्‍वरप्रति श्रद्धेय हृदय विकास गर्छन्। भ्रष्टाचारलाई हटाउने र साँचो मानव स्वरूपमा जिउने एकमात्र तरिका यही हो। त्यसैले, आखिरी दिनहरूमा परमेश्‍वरले न्याय गर्न देहधारण गर्नुभएर र सत्यताहरू व्यक्त गर्नुभएर मात्र यी फल प्राप्त गर्न सकिन्छ। कसैले सोध्न सक्छन्: किन परमेश्‍वरले यो काम देहमा गर्नुपर्ने? किन उहाँले आत्मिक रूपमा गर्न सक्नुहुन्न? परमेश्‍वरका वचनहरू पाठ गरिएको एउटा भिडियो हेरौँ न ताकि सबैले यो राम्रोसँग बुझून।
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर भन्नुहुन्छ, “परमेश्‍वरले मानिसलाई मुक्ति दिने काम सोझै आत्माको विधि र आत्माको पहिचानको माध्यमबाट गरिँदैन, किनकि उहाँको आत्मालाई मानिसले न त छुन सक्छ न त देख्न नै सक्छ, न त मानिस नजिक जान नै सक्दछ। यदि उहाँले मानिसलाई सीधा आत्माको दृष्टिकोण प्रयोग गरी मुक्ति दिन खोज्नुभयो भने, मानिस उहाँको मुक्ति प्राप्त गर्न असमर्थ बन्‍नेथियो। यदि परमेश्‍वरले सृष्टि गरिएको मानिसको बाहिरी रूप धारण गर्नुभएको थिएन भने, मानिसले यो मुक्ति पाउने कुनै उपाय हुनेथिएन। किनकि जसरी यहोवाको बादलको नजिक कोही पनि जान सकेन त्यसरी नै मानिस उहाँको नजिक आउने कुनै उपाय छैन। केवल एक सृष्टि गरिएको प्राणी बनेर अर्थात् उहाँको वचनलाई उहाँ बन्न लाग्नुभएको मासुको शरीरमा राखेर मात्र उहाँले आफ्नो पछि लाग्नेहरूमा व्यक्तिगत तवरले वचनअनुसार काम गर्न सक्नुहुन्छ। तब मात्र मानिसले व्यक्तिगत रूपमा उहाँको वचनलाई देख्न र सुन्न सक्दछ, र यसरी मात्र उसले पूर्ण रूपमा मुक्ति पाउन सक्छ। यदि परमेश्‍वर मानिस बन्नुभएको थिएन भने, मासु र रगत हुने कसैले पनि त्यस्तो ठूलो उद्धार प्राप्त गर्न सक्नेथिएन, न त एकै जना व्यक्तिले समेत मुक्ति पाउनेथियो। यदि परमेश्‍वरका आत्माले मानवजातिको माझ प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्नुभएको भए, सम्पूर्ण मानवजाति नै नष्ट हुनेथियो, अन्यथा, परमेश्‍वरको सम्पर्कमा आउनै नसक्‍ने गरी तिनीहरू पूर्ण रूपले शैतानको कैदमा पर्नेथिए” (वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “देहधारणको रहस्य (४)”)।
“मानिसको देहको भ्रष्टतालाई न्याय गर्ने कामको लागि देहमा हुनुहुने परमेश्‍वर जत्तिको अरू कोही पनि उपयुक्त र योग्य छैन। यदि परमेश्‍वरका आत्माले प्रत्यक्ष रूपमा नै न्याय गर्नुभएको भए, यो सर्व-स्वीकार्य हुँदैनथियो। यसको साथै, मानिसले त्यस्तो कार्यलाई स्वीकार गर्नु कठिन हुनेथियो, किनभने आत्मा मानिससँग आमने-सामने हुन सक्‍नुहुन्‍न, र यस कारणले गर्दा, यसको प्रभाव तत्‍कालीन हुनेथिएन, मानिसले परमेश्‍वरको रिस उठाउन नसकिने स्वभावलाई अझै स्पष्ट रूपमा देख्‍न सक्‍नु त परै जाओस्। देहमा हुनुहुने परमेश्‍वरले मानिसको भ्रष्टतालाई न्याय गर्नुभयो भने मात्रै शैतान पूर्ण रूपमा हार्न सक्छ। मानिसजस्तै सामान्य मानवता धारण गर्नुभएको हुनाले, देहमा हुनुहुने परमेश्‍वरले मानिसको अधार्मिकतालाई प्रत्यक्ष रूपमा न्याय गर्न सक्‍नुहुन्छ; यो उहाँको अन्तर्निहित पवित्रता, र उहाँको असाधारणताको चिन्‍ह हो। मानिसलाई न्याय गर्नको लागि परमेश्‍वर मात्रै योग्य, र यसो गर्ने स्थानमा हुनुहुन्छ, किनभने उहाँमा सत्यता, र धार्मिकता छ, त्यसैले उहाँले मानिसलाई न्याय गर्न सक्‍नुहुन्छ। सत्यता र धार्मिकता विहीनहरू अरूलाई न्याय गर्न योग्य छैनन्। यदि यो काम परमेश्‍वरका आत्माले गर्नुभयो भने, यसको अर्थ शैतानमाथिको विजय हो भन्नेथिएन। आत्मा अन्तर्निहित रूपमा मरणशील प्राणीहरूभन्दा उच्‍च हुन्छ, र परमेश्‍वरका आत्मा अन्तर्निहित रूपमा नै पवित्र, अनि देहमाथि विजयी हुनुहुन्छ। यदि यो काम आत्माले प्रत्यक्ष रूपमा गर्नुभयो भने, उहाँले मानिसका सारा अनाज्ञाकारितालाई न्याय गर्न सक्‍नुहुनेथिएन र मानिसको सबै अधार्मिकतालाई प्रकट गर्न सक्‍नुहुनेथिएन। किनभने न्यायको काम परमेश्‍वर सम्‍बन्धी मानिसको धारणाद्वारा पनि अघि बढाइन्छ, र आत्माको बारेमा मानिससँग कुनै धारणा कहिल्यै थिएन, त्यसकारण मानिसको अधार्मिकतालाई अझै राम्ररी प्रकट गर्न आत्मा असक्षम हुनुहुन्छ, त्यस्तो अधार्मिकतालाई पूर्ण रूपमा खुलासा गर्ने कुरा त परै जाओस्। देहधारी परमेश्‍वर उहाँलाई नचिन्‍नेहरू सबैका शत्रु हुनुहुन्छ। मानिसका धारणाहरूलाई र उहाँ प्रतिको विरोधलाई न्याय गरेर, उहाँले मानवजातिका सारा अनाज्ञाकारीतालाई खुलासा गर्नुहुन्छ। देहमा उहाँले गर्नुहुने कामका प्रभावहरू आत्माका कामभन्दा अझै स्पष्ट हुन्छन्। त्यसैले, सारा मानवजातिको न्याय प्रत्यक्ष रूपमा आत्माले गर्नुहुन्‍न, तर यो देहधारी परमेश्‍वरको काम हो। देहमा हुनुहुने परमेश्‍वरलाई मानिसले देख्‍न र छुन सक्छ, र देहमा हुनुहुने परमेश्‍वरले मानिसलाई पूर्ण रूपमा विजय गर्न सक्‍नुहुन्छ। देहमा हुनुहुने परमेश्‍वरसँगको आफ्‍नो सम्‍बन्धमा, मानिस विरोधबाट आज्ञापालनमा, सतावटबाट स्वीकारमा, धारणाहरूबाट ज्ञानमा, अनि इन्कारबाट प्रेममा उन्नत हुन्छन्—यी देहधारी परमेश्‍वरको कामका प्रभावहरू हुन्” (वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “भ्रष्ट मानवजाति देहधारी परमेश्‍वरको मुक्तिको अझै बढी खाँचोमा छ”)।
अब मलाई लाग्छ, परमेश्‍वरले किन व्यक्तिगत रूपले देहमा भएर न्यायको काम गर्नुहुन्छ भनेर हामी सबैले अलिक बुझ्यौँ। किनभने परमेश्‍वर देह हुनु नै मानिसहरूसँग व्यावहारिक रूपमा अन्तरक्रिया गर्ने, बोल्ने, जहाँ र जहिले पनि सत्यतामा सङ्गति गर्ने, हामीले प्रकट गर्ने भ्रष्टाचारअनुसार हाम्रो खुलासा र न्याय गर्ने, र पानी हाल्ने, गोठालो गर्ने र आवश्यकताअनुसार हामीलाई सहायता गर्ने उहाँको एकमात्र माध्यम हो। उहाँले आफ्नो इच्छा र मापदण्ड स्पष्ट रूपमा बताउन सक्ने एक मात्र तरिका यही हो। के हामीले व्यक्तिगत रूपमा परमेश्‍वरको मार्गबारे सुन्नु र उहाँले व्यक्त गर्नुभएका सत्यताहरू बुझ्नु सत्यता र मुक्ति प्राप्तिका लागि सबैभन्दा लाभदायक छैन र? साथै, परमेश्‍वर सामान्य दिनचर्या गर्ने व्यक्तिको रूपमा देह बन्नुहुँदा, मानिसहरूले धारणा राख्न सक्छन् अर्थात् तिनीहरू विद्रोही हुन सक्छन् भन्ने तपाईंलाई लाग्छ? निश्चित रूपमा। मानिसहरूले ख्रीष्टलाई बाहिरी रूपमा एकदमै सामान्य व्यक्ति देख्नासाथ, तिनीहरूको मनमा धारणा, विद्रोह र प्रतिरोध उत्पन्न हुन्छ, र तिनीहरूले केही नभन्दा वा बाहिर नदेखाउँदा, तिनीहरूले जतिसुकै बहाना गरे पनि, परमेश्‍वरले हेरिरहनुभएको छ र यसलाई लुकाउने कुनै पनि प्रयास सफल हुन सक्दैन। परमेश्‍वरले मानिसको मनभित्र लुकेको कुनै पनि कुरा सिधै प्रकट गर्नुहुन्छ। तसर्थ, देहमा हुनुभएका परमेश्‍वरले मात्र मानिसहरूलाई उनीहरूको विद्रोह र प्रतिरोध प्रकट गर्दै सबैभन्दा राम्रोसँग खुलासा गर्न सक्नुहुन्छ। यो, न्याय कामको लागि सबैभन्दा लाभदायक छ। यदि परमेश्‍वरले सीधै आत्माद्वारा शब्दहरू बोल्नुभयो भने के हुन्छ? मानिसहरूले उहाँको आत्मालाई हेर्न, छुन वा नजिक आउन सक्नेथिएनन्, र उहाँको आत्मा बोल्दा स्थिति डरलाग्दो हुनेथ्यो। तब तिनीहरूले कसरी आफ्नो हृदय परमेश्‍वरलाई खोल्न, वा सत्यता सिक्न सक्थे र? र आत्माको अघि कसले पो धारणाहरू राख्न आँट गर्नेथिए र? कसले भ्रष्टाचार प्रकट गर्न अथवा विद्रोही वा प्रतिरोधी हुन आँट गर्नेथिए र? कसैले गर्नेथिएन। सबै जना डरले थरथर काँप्नेथिए, भुइँमा लल्पासार पर्नेथिए, अनुहारको रङ उड्नेथ्यो। यस्तो डरलाग्दो स्थितिमा मानिसहरूको सत्य कुरा कसरी खुलासा हुन्थ्यो र? तिनीहरूको कुनै पनि धारणा वा विद्रोह देखिनेथिएन, त्यसोभए, न्याय कसरी गर्न सकिन्थ्यो त? प्रमाण के हुनेथियो? यही कारणले परमेश्‍वरका आत्माको कामले मानिसहरूको सबैभन्दा वास्तविक व्यवहार पत्ता लगाउन सकेन, तिनीहरूलाई खुलासा गर्न सकेन, र परमेश्‍वरको न्यायको काम पूरा हुन सकेन। अनि परमेश्‍वरको देहधारण उहाँको आत्माभन्दा न्याय कार्यका लागि धेरै प्रभावकारी छ। हामी सर्वशक्तिमान परमेश्‍वरलाई मानिसजातिमाझ, बिहानदेखि बेलुकासम्म हामीसँग बसेको देख्न सक्छौं। हाम्रो हरेक चाल, हरेक विचार, हामीले प्रकट गर्ने हर किसिमको भ्रष्टाचार, सबै परमेश्‍वरले देख्नुहुन्छ र पूर्ण रूपमा बुझ्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई कुनै पनि समय र स्थानमा खुलासा र न्याय गर्न सत्यताहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रा भ्रष्टताहरू, परमेश्‍वरबारे हाम्रा धारणा र कल्पनाहरूलाई र साथै, परमेश्‍वरलाई प्रतिरोध गर्ने र धोका दिने हाम्रो अन्तर्निहित प्रकृतिहरूलाई उजागर गर्नुहुन्छ। हामीले परमेश्‍वरका वचनहरू पढ्दा, हामीलाई आफू उहाँको आमनेसामने भएको जस्तो लाग्छ। यो एकदमै मार्मिक र लज्जित पार्ने कुरा हो, र हामी आफ्नो भ्रष्टाचारको सत्यता उहाँका शब्दहरूमा स्पष्टसित देख्छौँ। हामी आफूलाई हृदयदेखि घृणा गर्छौं र पश्चात्ताप गर्छौं र परमेश्‍वरसामु जिउन असाध्यै अयोग्य महसुस गर्छौँ। परमेश्‍वरको न्यायद्वारा, उहाँ कत्ति धेरै धर्मी र पवित्र हुनुहुन्छ भनेर पनि बुझ्छौँ, र उहाँले साँच्चै हाम्रो हृदय र मन जाँच्नुहुन्छ। हाम्रो हृदयभित्र गहिरो गाडिएको भ्रष्ट सोच र विचारहरू कति त हामीले पहिचान पनि गरेका छैनौँ, ती सबैको परमेश्‍वरले एक-एक गरी खुलासा र न्याय गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ, कठोर निन्दा र श्राप मार्फत, हामीलाई परमेश्‍वरको नचिढिने स्वभाव हेर्न अनुमति दिइन्छ, अनि अन्त्यमा, हामीले परमेश्‍वरको डर मान्नेछौँ। परमेश्‍वरको न्याय नपाई, हामीमध्ये कसैले पनि परमेश्‍वरको धार्मिकता वा पवित्रता जान्‍नेछैनौँ, र कसैले पनि मानिसहरू शैतानी प्रकृतिअनुसार जिएको, परमेश्‍वरको प्रतिरोधी भएको, र परमेश्‍वरबाट श्राप र सजाय पाउन योग्य भएको देख्न सक्दैन। परमेश्‍वरको न्याय, सजाय र परीक्षाहरूले गर्दा नै हामी साँच्चै पश्चात्ताप गर्न सक्छौँ, अन्ततः भ्रष्टाचार हटाउन सक्छौँ अनि शुद्ध र परिवर्तन हुन सक्छौँ। र अहिलेसम्म ख्रीष्टलाई पछ्याएर, हामी के देख्न सक्छौँ भने, देहधारी परमेश्‍वर हामीमाझ जिउनुहुन्छ, नम्र र गुप्त हुनुहुन्छ, र केवल हामीलाई भ्रष्ट मानिसजातिबाट पूर्ण रूपमा मुक्ति दिनका लागि ईमानदारीपूर्वक र धैर्यतापूर्वक धेरै सत्यहरू व्यक्त गर्नुहुँदैछ। यदि देहधारी परमेश्‍वर हामीलाई न्याय गर्न र शुद्ध पार्न व्यक्तिगत रूपमा नआउनुभएको भए, र हामीलाई सबै सत्यता प्रदान नगर्नुभएको भए, हामी जस्ता विद्रोही र भ्रष्ट मानिसहरू पक्कै हटाइनेथिए र दण्डित हुनेथिए। तब हामी कसरी बच्न सक्थ्यौँ र? मानिसजातिका लागि परमेश्‍वरको प्रेम धेरै महान् छ र परमेश्‍वर धेरै प्यारो हुनुहुन्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्‍वरले हाम्रा बीचमा सत्यताहरू व्यक्त गर्नुहुन्छ, मानिसजातिलाई व्यावहारिक तरिकामा मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ, पोषण दिनुहुन्छ, मदत गर्नुहुन्छ। परमेश्‍वरको आवाज सुन्ने र उहाँको मुहार हेर्ने, परमेश्‍वरद्वारा न्याय र शुद्धीकरण गरिने, धेरै सत्यता सिक्ने र प्राप्त गर्ने अनि साँचो मानव स्वरूपमा जिउने एकमात्र मौका यही हो। आखिरी दिनहरूमा देहधारी परमेश्‍वरको कामबाट सबैभन्दा धेरै लाभ उठाउनेहरू ख्रीष्टलाई पछ्याउने हाम्रो यस समूहका हुन्। परमेश्‍वरबाट जे पाउँछौँ त्यो साँच्चै अपार छ। सर्वशक्तिमान परमेश्‍वरका वचनहरूले त्यसै भन्छन्, “देहमा गरिने उहाँको कार्यको सबैभन्दा उत्तम कुरा भनेको उहाँले यथार्थ वचनहरू र अर्तीहरू, र मानवजातिप्रतिको उहाँको निश्‍चित इच्छालाई उहाँको पछि लाग्‍नेहरूमा छोड्न सक्‍नुहुन्छ, ताकि त्यसपछि उहाँका अनुयायीहरूले अझै यथार्थ रूपमा र अझै ठोस रूपमा देहमा गरिने उहाँको सारा काम, र सारा मानवजातिप्रति उहाँको इच्‍छालाई यो मार्ग स्वीकार गर्नेहरूमा हस्तान्तरण गर्न सक्‍नेछन्। मानिसको बीचमा देहमा गरिने परमेश्‍वरको कामले मात्रै परमेश्‍वर मानिससँगै रहनु र सँगै बस्‍नुको तथ्यलाई साँचो रूपमा पूरा गर्न सक्छ। यो कार्यले मात्रै परमेश्‍वरको मुहारलाई हेर्ने, परमेश्‍वरको कामलाई अवलोकन गर्ने, र परमेश्‍वरको व्यक्तिगत वचन सुन्‍ने मानिसको इच्‍छालाई पुरा गर्न सक्छ। यहोवाको फर्काइ मानवजातिकहाँ देखा परेको बेला मात्रै देहधारी परमेश्‍वरले त्यो युगलाई समाप्त गर्नुहुन्छ, र अस्पष्ट परमेश्‍वरमाथिको मानवजातिको विश्‍वासको युगलाई पनि उहाँले समाप्त गर्नुहुन्छ। निश्‍चित रूपमा, अन्तिम देहधारी परमेश्‍वरको कार्यले सारा मानवजातिलाई त्यो युगमा ल्याउँछ जुन अझै वास्तविक, अझै व्यवहारिक, र अझै सुन्दर हुन्छ। उहाँले व्यवस्था र धर्मसिद्धान्तको युगलाई समाप्त गर्ने मात्र होइन, तर अझै महत्त्वपूर्ण कुरा, उहाँले मानवजातिको निम्ति त्यो परमेश्‍वरलाई प्रकट गर्नुहुन्छ जो वास्तविक र सामान्य हुनुहुन्छ, जो धर्मी र पवित्र हुनुहुन्छ, जसले व्यवस्थापन योजनाको कार्य खुल्ला पार्नुहुन्छ, जसले मानवजातिको रहस्यहरू र गन्तव्यलाई प्रदर्शन गर्नुहुन्छ, जसले मानवजातिलाई सृष्टि गर्नुभयो र व्यवस्थापन कार्यलाई समाप्त गर्नुहुन्छ, अनि जो हजारौं वर्षसम्‍म गुप्त बस्‍नुभयो। उहाँले अस्पष्टताको युगलाई पूर्ण रूपमा समाप्त गर्नुहुन्छ, उहाँले त्यो युगलाई अन्त्य गर्नुहुन्छ जुन युगमा सारा मानवजातिले परमेश्‍वरको मुहारलाई हेर्ने इच्‍छा गर्छन् तर त्यसो गर्न सक्दैनन्, उहाँले त्यो युगलाई समाप्त गर्नुहुन्छ जुन युगमा सारा मानवजातिले शैतानको सेवा गरे, अनि उहाँले सारा मानवजातिलाई पूर्ण रूपमा नयाँ युगमा डोर्याउनुहुन्छ। यी सबै परमेश्‍वरका आत्माको स्थानमा देहमा हुनुहुने परमेश्‍वरको कामको परिणाम हो” (वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “भ्रष्ट मानवजाति देहधारी परमेश्‍वरको मुक्तिको अझै बढी खाँचोमा छ”)।
सर्वशक्तिमान परमेश्‍वरले सत्यताहरू व्यक्त गर्नुभएको र आफ्ना आखिरी दिनहरूको न्यायको काम गर्नुभएको अहिले तीन दशक भइसक्यो। परमेश्‍वरका चुनिएका मानिसहरूले उहाँका वचनहरूको न्यायद्वारा आफ्ना भ्रष्ट स्वभावहरू धोएका छन्, र परमेश्‍वरले विपत्तिहरू आउनुअघि विजयीहरूको समूह पूरा गर्नुभएको छ—तिनीहरू पहिलो फल हुन्। तिनीहरूले ठूलो रातो अजिङ्गरको उन्मादपूर्ण दमन पार गर्नुपरे तापनि निरन्तर ख्रीष्टलाई पछ्याएका छन् र गवाही दिएका छन्। तिनीहरूले शैतानलाई परास्त गरेका छन् र परमेश्‍वरको उत्कृष्ट साक्षी दिएका छन्। यसले प्रकाशको पुस्तकको यो अगमवाणी पूरा गर्छ: “यिनीहरू महा-संकष्टबाट भएर आएका, र आफ्‍ना वस्त्र धोएर, तिनलाई थुमाको रगतमा सेतो बनाउनेहरू हुन्” (प्रकाश ७:१४)। देहधारी परमेश्‍वरले सत्यता व्यक्त गरिरहनुभएको बेला, ठूला र साना हरेक सम्प्रदायका नेताहरू र ख्रीष्टविरोधीहरू पूर्ण रूपले खुलासा भएका छन्। तिनीहरूले के बुझ्छन् भने, सर्वशक्तिमान परमेश्‍वर सामान्य व्यक्तिको रूपमा देखा पर्नुहुन्छ, उहाँ आत्मा हुनुहुन्न, र त्यसैले तिनीहरूले बिनाकारण उहाँको विरोध र निन्दा गर्छन्। आफ्नो हैसियत र जीवन जोगाउन, तिनीहरू उन्मत्त भएर विश्‍वासीहरूलाई परमेश्‍वरको आवाज सुन्न र साँचो मार्ग अनुसन्धान गर्नदेखि रोक्न लागिपर्छन्। सत्यतालाई घृणा गर्ने यी मानिसहरूको वास्तविक अनुहार खुलासा भएको छ, र तिनीहरूलाई निन्दा गरिएको छ र हटाइएको छ। परमेश्‍वर देह नहनुभएको भए, तिनीहरू मण्डलीमा लुकेर बस्नेथिए, अझै पनि विश्‍वासीहरूको रगत चुसिरहेका हुनेथिए र परमेश्‍वरका भेटीहरू चोरिरहेका हुनेथिए, धेरै मानिसहरूलाई बहकाइरहेका र बर्बाद पारिरहेका हुनेथिए। परमेश्‍वरले देहमा न्याय गर्नुभएकोले गर्दा, ख्रीष्टविरोधी र अविश्‍वासीहरु, सत्यतालाई प्रेम गर्ने वा नगर्नेहरू, सत्यतालाई तिरस्कार गर्ने वा घृणा गर्नेहरू, सबै खुलासा भएका छन्। सत्यतालाई प्रेम गर्ने र बुझ्नेहरूले शैतानको कुरूप अनुहार स्पष्ट रूपमा देखेका छन् साथै, शैतानले कसरी परमेश्‍वरविरुद्ध काम गर्छ र मानिसजातिलाई बहकाउँछ भनेर पनि देखेका छन्। तिनीहरूले शैतानलाई पूर्णतया इन्कार गरेका छन् र त्यागेका छन् अनि पूर्ण रूपले परमेश्‍वरतर्फ फर्केका छन्। परमेश्‍वरले अन्ततः असल व्यक्तिलाई इनाम दिनुहुन्छ र खराब व्यक्तिलाई दण्ड दिनुहुन्छ, उहाँविरुद्ध काम गर्ने सबै दुष्ट शक्तिहरूलाई नष्ट गर्नका लागि ठूला विपत्तिहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, अन्ततः शैतानको अधीनमा भएको यो पुरानो युगको अन्त्य गर्नुहुन्छ, र त्यसपछि उहाँको न्यायद्वारा शुद्ध पारिएकाहरूलाई सुन्दर गन्तव्यमा लैजानुहुन्छ। यसले प्रकाशको पुस्तकका यी अगमवाणीहरू पूरा गर्छ: “अन्यायी, अझै अन्यायी नै रहिरहोस्: अनि फोहोरी, अझै फोहोरी नै रहिरहोस्: र धर्मी, अझै धर्मी नै रहिरहोस्: अनि पवित्र, अझै पवित्र नै रहिरहोस्” (प्रकाश २२:११)। “अनि हेर, म चाँडै आउँछु; हरेक मानिसलाई उसको कामअनुसार दिन मेरो इनाम मसँगै छ” (प्रकाश २२:१२)।
आउनुहोस्, सर्वशक्तिमान परमेश्‍वरको वचनको अर्को खण्ड पढेर समाप्त गरौँ। “परमेश्‍वरको दोस्रो देहधारणका बारेमा धेरै व्यक्तिहरूमा खराब अनुभूति छन्, किनकि न्यायको काम गर्नका लागि परमेश्‍वर देह बन्नुहुन्छ भन्ने कुरा विश्‍वास गर्न धेरै मानिसहरूलाई कठिनाइ हुन्छ। तर पनि, परमेश्‍वरको काम प्राय मानवका अपेक्षाहरूभन्दा धेरै पर हुन्छन्, र यसलाई स्वीकार गर्नका लागि मानव मनलाई कठिन हुन्छ भन्ने कुरा मैले तँलाई बताउनै पर्छ। किनभने मानिसहरू पृथ्वीका कीराहरू मात्र हुन्, र परमेश्‍वरचाहिँ विश्‍वलाई भर्नुहुने सर्वोच्च व्यक्ति हुनुहुन्छ; मानवको मन फोहोर पानीको खाडलजस्तो हो, जसले कीराहरूमात्रै जन्माउँछ, तर परमेश्‍वरका विचारहरूद्वारा निर्देशित कार्यको प्रत्येक कदम परमेश्‍वरको बुद्धिको फल हो। मानिसहरूले जहिले पनि परमेश्‍वरसँग झगडा गर्ने कोसिस गर्छन्, र अन्त्यमा कसले हार्नेछ भन्ने कुरा स्वयं सिद्ध छ भनी म भन्छु। तिमीहरूले आफूलाई सुनभन्दा बढी मूल्यवान् नठान भनी म तिमीहरू सबैलाई अर्ती दिन्छु। यदि अरूले परमेश्‍वरको न्यायलाई स्वीकार गर्न सक्छन् भने, तँ किन सक्दैनस्? तँ अरूहरूभन्दा कति माथि खडा छस्? यदि अरूहरूले सत्यताको सामु आफ्ना शिरहरू निहुर्याउन सक्छन् भने, तँ पनि किन सक्दैनस्? परमेश्‍वरको कामको रोक्नै नसकिने गति छ। तैँले दिएको ‘योगदान’ को कारणले गर्दा मात्रै उहाँले न्यायको कार्यलाई फेरि दोहोर्याउनुहुने छैन, र अनि यति असल अवसरलाई गुमाउनु परेकोमा तँ पछुतोले भरिनेछस्। यदि तँ मेरा वचनहरूलाई विश्‍वास गर्दैनस् भने, तँमाथि न्याय आउनका लागि आकाशको ठूलो सेतो सिंहासनको निम्ति पर्खी! सबै इस्राएलीहरूले येशूलाई निन्दा र इन्कार गरेका कुरा तँलाई थाहा हुनैपर्छ, र पनि सबै मानवजातिका निम्ति भएको येशूको उद्धारको यथार्थ सारा विश्‍वभरि र पृथ्वीको अन्त्यसम्म फैलिएको छ। के परमेश्‍वरले धेरै पहिले बनाउनुभएको यथार्थ यो होइन र? तँलाई स्वर्ग लैजानका लागि यदि तँ अझै येशूलाई पर्खिरहेको छस् भने, तँ मृत काठको ठुटाजस्तो[क] हठी छस् भनी म भन्दछु। येशूले तँजस्ता सत्यप्रति निष्ठा नभएका र आशिषमात्र खोज्ने झूटा विश्‍वासीलाई स्वीकार गर्नुहुनेछैन। बरु, लाखौँ वर्षसम्म आगोको कुण्डमा जलिरहन उहाँले तँलाई त्यहाँ फाल्दा कुनै कृपादेखाउनुहुनेछैन” (वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “ख्रीष्टले सत्यताद्वारा न्यायको काम गर्नुहुन्छ”)।
अर्को: एउटै परमेश्‍वरले कामका तीन चरणहरूलाई कसरी पूरा गर्नुहुन्छ